Dell EMC World: သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာပြောင်းလဲခြင်းအတွက်စည်းမျဉ်း ၁၀ ခု | Martech Zone
wow ဘာစုံတွဲတစ်တွဲရက်သတ္တပတ်! ကျွန်တော်သတိထားမိသည်ကကျွန်ုပ်သည်မကြာခဏရေးသားခြင်းမရှိသေးသောကြောင့်တည်း Dell EMC ကမ္ဘာ့ဖလား Mark Schaefer နှင့်ကျွန်တော်သည် Dell Technology ကုမ္ပဏီများမှခေါင်းဆောင်များနှင့်၎င်းတို့အတွက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကိုအခွင့်ထူးရရှိခဲ့သည် Luminaries Podcast တခုကို။ ဒီကွန်ဖရင့်ကိုရှုထောင့်အဖြစ်ထားရန်၊ ကျွန်ုပ်သည်ပထမနေ့ ၄.၈ မိုင်လမ်းလျှောက်ပြီးနေ့စဉ် ၃ မိုင်ကိုပျမ်းမျှအားဖြင့်အနားယူပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်အနားယူပြီးအလုပ်အချို့ရရှိရန်ထောင့်များကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်အတူဖြစ်သည်။ ငါအဲဒီအကွာအဝေးကိုနှစ်ကြိမ်လမ်းလျှောက်ပြီးကောင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုလွဲချော်နေတုန်းပဲ။
ကွန်ဖရင့်သည်နည်းပညာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်စဉ်အတွင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာပညာရှင်များသည်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၏မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတွင်အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်မည်ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကုမ္ပဏီများသည် ၄ ​​င်းတို့၏စီးပွားရေးကဏ္ aspect အားလုံးနီးပါးတွင်နည်းပညာကိုအားထားနေပြီးဖြစ်သည်။ အနာဂတ်သည်အခြားရှုထောင့်တိုင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုပေးသည်။
တိကျသောဝေါဟာရအချို့ကိုမကြည့်ရှုမီ၊ ဘာကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည် အိုင်တီပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည် နှင့်မည်သို့ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ် အသွင်ပြောင်းရင့်ကျက်y.
သင်၏အိုင်တီပြောင်းလဲခြင်းသည်သင်၏အဖွဲ့အစည်း၏အခြေခံအဆောက်အအုံအပေါ်ချဉ်းကပ်မှုကိုချိန်ညှိခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်မီးထွန်းခြင်းကိုထိန်းသိမ်းခြင်းမဟုတ်ဘဲစီးပွားရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များရရှိရေးအတွက်အိုင်တီကိုမောင်းနှင်အားအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သည်။ ခေတ်မီဒေတာစင်တာကိုရလဒ်များအရှိန်မြှင့်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
တနည်းအားဖြင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ဖြစ်လာသည် နည်းပညာကို ကုမ္ပဏီများ။ သူတို့၏ပလက်ဖောင်းများအားခေတ်မီအောင်လုပ်ခြင်း၊ သင့်လျော်သောလုပ်သားအင်အားကိုငှားရမ်းခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးကိုအဓိကထားခြင်းတို့သည်အဓိကကျသည့်ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများစတင်သည့်ဘတ်ဂျက်များကိုဖွင့်လှစ်လိုက်သောအထူးငွေစုများကိုသဘောပေါက်ကြသည်။ မကြာခင်အနာဂတ်မှာသင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်သင့်ဖောက်သည်များ၏မျှော်လင့်ချက်များကိုမည်သို့ပြောင်းလဲမည်ကိုစဉ်းစားရန်နှင့်သင်စတင်စဉ်းစားသင့်သောအသုံးအနှုန်းအချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
convergence - ပေါင်းစည်းထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံ (CI) သည်ဒေတာစင်တာ၏အဓိကကဏ္aspectsများကိုစုစည်းပေးသည် - ကွန်ပျူတာ၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်သီးခြားဖွဲ့စည်းမှုများမရှိတော့ပါ၊ မျှော်လင့်ထားသည့်စွမ်းဆောင်ရည်ရလဒ်များနှင့်အလွယ်တကူмасштабနိုင်သည်။
Hyper- ပေါင်းစည်း - ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပေါင်းစည်းမှုလိုအပ်ချက်ကိုလျှော့ချပြီးအမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်ကျချိန်များသိသိသာသာလျှော့ချခြင်း၊ ကဏ္ aspects လေးရပ်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
virtualization - Virtualized system များသည်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်ကြာလှည့်ပတ်နေခဲ့သော်လည်း system များအတွင်း virtualization အတွက်စွမ်းရည်သည်ဤနေရာတွင်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများသည်ဒေသတွင်းသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့် virtual ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တိုးတက်နေပြီးလိုအပ်သည့်အခါထုတ်လုပ်မှုသို့ပြောင်းရွှေ့သွားသည်။ Virtualization ဆော့ဖ်ဝဲသည်ပြင်ဆင်မှုအနည်းငယ်သာလိုအပ်ပြီးလိုအပ်ချက်များကိုစောင့်ကြည့်သည်နှင့်တုံ့ပြန်လာသည်နှင့်အမျှ ပိုမို၍ ပို၍ ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်လာလိမ့်မည်။
persistent မှတ်ဉာဏ် - မျက်မှောက်ခေတ်တွက်ချက်မှုသည်အချက်အလက်သိုလှောင်မှုနှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Persistent memory သည် computing လုပ်နိုင်သော memory ထဲမှာ memory ကိုသိုလှောင်ထားခြင်းဖြင့်ကွန်ပျူတာကိုပြောင်းလဲစေသည်။ မနေ့ကဆာဗာများ၏အမြန်နှုန်းကိုနှစ်ဆမှဆယ်ဆအထိသိရှိနိုင်ရန်ဆာဗာလည်ပတ်မှုစနစ်များကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်လိမ့်မည်။
cloud computing - ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာခဏမိုthe်းတိမ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ software၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သိုလှောင်မှု (သို့) ဒေတာစင်တာများတွင်တည်ရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရန်ကူးစနစ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သို့သော် မိုဃ်းတိမ်ကို အနာဂတ်၏အသိဉာဏ်ရှိနိုင်ပြီးအိမ်တွင်း၊ တိုတောင်းသောသို့မဟုတ်နေရာတိုင်းတွင်ထုတ်လုပ်မှုတိမ်များထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ဉာဏ်ရည်တု - စျေးကွက်သမားများက AI ကိုဆော့ (ဖ်) ဝဲအတွက်စွမ်းရည်အဖြစ်နားလည်သည် ထင် နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် software ကိုထုတ်လုပ်ရန်။ ဒါကကြောက်စရာကောင်းပေမယ့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ်။ AI အနေဖြင့် IT အခြေခံအဆောက်အအုံများအနေဖြင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲပမာဏ၊ ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချခြင်းနှင့်ပြcorrectနာများကိုဖြေရှင်းရန်အခွင့်အလမ်းများကိုပေးလိမ့်မည်။
သဘာဝဘာသာစကားများထုတ်ယူခြင်း - Amazon, Google, Microsoft နှင့် Siri တို့ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည် NLP နှင့်ရိုးရှင်းသော command များကိုတုန့်ပြန်ရန်နှင့်တုန့်ပြန်ရန်စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ သို့သော်ရှေ့သို့ရွေ့လျားနေသည့်ဤစနစ်များသည်လူသားများထက်အသိဥာဏ်ရှိရှိ (သို့မဟုတ် ပို၍ ပင်ကောင်းမွန်သော) တုန့်ပြန်မှုပြုလိမ့်မည်။
Utility ကိုကွန်ပျူတာ - သင်ထွက်ပေါက်တစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်သောအခါသင်၏ကိရိယာအားပါဝါကိုသေချာစေရန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်၊ ဇယားကွက်၊ အမ်ပီဂျန်သို့မဟုတ်အရန်ကူးခြင်းများကိုသင်မစဉ်းစားပါ။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၏လမ်းညွှန်၊ လက်ပ်တော့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာအခြေခံအဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ နညျးလမျးမြားစှာတှငျကြှနျုပျတို့ရှိနနေိုငျသျောလညျးအမှနျတရားပိုငျလာသညျ။
ရောနှောထားသော Reality ဒီမှာလေ့လာနေသည့်တွက်ချက်မှုစွမ်းအားသည်ကျွန်ုပ်တို့တွေးမိသမျှထက် ကျော်လွန်၍ ဆက်လက်တိုးမြှင့်နေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တကယ့်အစစ်အမှန်အပေါ်သို့မြှင့်တင်ထားသောကမ္ဘာကြီးကိုဖုံးအုပ်ထားနိုင်သည်။ iPhone နှင့် Google Glass များထက် ကျော်လွန်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မဆက်သွယ်မီကျွန်ုပ်တို့၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကိုပေါင်းစပ်ထားသည့် embeddable implants များရှိသည်။
အရာ၏အင်တာနက်ကို - ကုန်ကျစရိတ်ကျဆင်းလာခြင်း၊ ဟာ့ဒ်ဝဲကျဆင်းခြင်း၊ bandwidth တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်တွက်ချက်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်လာခြင်းကြောင့် IoT သည်တသမတ်တည်းတိုးတက်နေသည်။ Dell Technologies မှကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့စကားပြောသောအခါ IoT မှကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်အခြားသောတည်ရှိမှုကဏ္aboutများအကြောင်းလေ့လာခဲ့သည်။
ဖော်ပြခဲ့သည့်ဥပမာတစ်ခုမှာဒိန်ခဲထုတ်လုပ်မှုအတွက်လိုအပ်သောခဲများကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် IoT နှင့်စိုက်ပျိုးရေးကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်နို့ထုတ်လုပ်မှုနွားများသည်သူတို့၏အစားအစာနှင့်အာဟာရကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့်ကိရိယာများကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဒါကဒီနည်းပညာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနဲ့ထိရောက်မှုအဆင့်ဖြစ်တယ်။ ဝိုး!
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့ကိုမောင်းနှင်စေတဲ့ဒီနည်းပညာတွေထဲကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး အားလုံး၏ပေါင်းစပ် လျှင်မြန်စွာစျေးကွက်သွား၏။ အင်တာနက်နှင့်အီးကောမတ်စ်စတင်ကတည်းကကျွန်ုပ်တို့မမြင်ရသောနည်းပညာတိုးတက်မှုကိုတွေ့မြင်နေရသည်။ ထိုတိုးတက်မှုများကဲ့သို့ပင်များစွာသောကုမ္ပဏီများသည်ကျန်ရှိနေသေးသောကုမ္ပဏီများသည်ဈေးကွက်ဝေစုကိုရယူသုံးစွဲခြင်းအားဖြင့်စျေးကွက်ဝေစုကိုရယူနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်ကြည့်နေမည်။ ဖောက်သည်များသည်မွေးစားခြင်း၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းနှင့်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုအထောက်အကူပြုရန်သင်၏ကုမ္ပဏီသည်နည်းပညာတွင်အပြည့်အဝရင်းနှီးမြှပ်နှံရမည်ကိုမျှော်လင့်သည်။
ထုတ်ဖော် - Dell EMC World သို့တက်ရောက်ရန်နှင့် Luminaries Podcasts များပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အား Dell မှပေးခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကဒီ post ကိုရေးဖို့မကူညီခဲ့ကြဘူး။ ဒါကြောင့်ငါ့ဖော်ပြချက်တွေကနည်းနည်းလေးပဲ။ ငါကနည်းပညာကိုနှစ်သက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကအဲဒါကိုအပြည့်အဝနားလည်တယ်လို့တောင်မဆိုလိုပါဘူး။
Tags: aiဉာဏ်ရည်တုအလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှုcloud computingconvergienceDelldell emcdell EMC ကမ္ဘာကြီးGenomicsအလွန်အကျွံiotရောထွေးအဖြစ်မှန်သဘာဝဘာသာစကားအပြောင်းအလဲနဲ့nlpဇွဲအသွင်ပြောင်းutility တွက်ချက်မှုvirtualizationVMware က